Pataloha Ity ranom-borona ity dia fitambaran-dovitra amin'ny pataloha, umbrella ary pataloha fiarovan'ny rano. Arakaraka ny toetry ny toetrandro sy ny habetsahan'ny orana dia azo apetraka amin'ny ambaratonga samihafa amin'ny fiarovana. Ny mampiavaka azy dia ny mampifangaro kapoaka sy elo amin'ny zavatra iray. Miaraka amin'ny “rain-janon-kano” tsy misy tanana ny tanana. Ary koa, mety ho tonga lafatra amin'ny hetsika fanatanjahantena toy ny bisikileta. Ho fanampin'ny arabe feno olona dia tsy tafiditra ao anaty elo ianao satria miitatra eo ambonin'ny sorokaranao ny elo.
Ny Peratra Ity dia firavaka mahavariana amin'ny toetra mystical. "Doppio", amin'ny endrika manintona azy, dia mandehandeha amin'ny lalana roa hanehoana ny andron'ny lehilahy: ny lasa sy ny ho avy. Izy io dia mitondra ny volafotsy sy ny volamena izay maneho ny fampandrosoana ny hatsaran'ny fanahy olombelona mandritra ny tantarany eto ambonin'ny tany.
Peratra Sy Pendant
Peratra Sy Pendant Ny famoriam-bola voajanahary Natural dia noforonina ho fanomezam-boninahitra ny ala Amazon, lova tsy ho an'i Brezila ihany, fa manerana izao tontolo izao. Ity famoriam-bola ity dia manangona ny hatsaran-tarehy amin'ny natiora miaraka amin'ny maha-olona ny fofom-behivavy izay ahitana ny firavaka ary mamihina ny vatan'ny vehivavy.
Rojo Ny Necklace dia tena marefo ary vita amin'ny marika samihafa amidy tsy misy ilana azy miaraka miaraka amin'ny cascade tsara tarehy amin'ny faritry ny vehivavy. Ny voninkazo afovoany amin'ny sisiny havanana dia mihodina ary misy fahazoan-dàlana hampiasana ny haingony havia havia amin'ny rojo manokana ho toy ny broch. Ny lanjan'ny gross ho azy dia 362.50 grama vita dia 18 karat, misy karbà vato sy diamondra 518.75
Foulard Ny "Passion" dia iray amin'ireo singa "Regards". Aforeto tsara ny satroka fehilasy amin'ny alàlan'ny paosy na apetraho ho toy ny asa tanana ary ataovy maharitra mandritra ny androm-piainany. Toy ny lalao izany - ny zavatra tsirairay dia manana mihoatra ny asa iray. Ny "regards" dia ahitana fifanoherana malefaka eo anelanelan'ny asa tanana taloha sy ny zavatra maoderina. Ny famolavolana tsirairay dia sangan'asa tsy manam-paharoa ary mitantara tantara hafa. Alao sary an-tsaina ny toerana iray izay miresaka ny antsipiriany kely rehetra, izay sarobidy ny aina, ary ny fahatongavana lehibe indrindra dia ny tenanao manokana. Eo no ifihaonananao "Regards". Avelao ny kanto hihaona aminao ary ho antitra miaraka aminao!
Ny Fanangonana Firavaka
Ny Fanangonana Firavaka Ny Tetikasa ho an'ny lahasa 02 dia famoriam-bolongana misy kofehy mahafinaritra sy manentana mahavelomin'ny aingam-panahy boribory. Ny ampahany tsirairay dia noforonina miaraka amin'ny rindrambaiko Aided Design Computer, namboarina manontolo na ampahany amin'ny teknolojia pirinty Selective Laser na Steel 3D ary tanana vita amin'ny teknika silversmithing nentim-paharazana. Ny famoriam-bola dia manentana aingam-panahy avy amin'ny endrika boribory ary natao manokana hanoratana sary an-tsaina ny teorika Euclidean ho toy ny endrika sy endrika endrika kanto azo entina, maneho izany, toy izao ho fanombohana vaovao; fanombohana amin'ny hoavy mahafinaritra.
Pataloha Ny Peratra Peratra Sy Pendant Rojo Foulard Ny Fanangonana Firavaka